Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » Iimbadada Iiholide ezibandakanya konke: Usapho luphela!
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Iintsapho ziyavuya kwiiSandals!
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziye zafana nomfanekiso wesibini esonwabileyo esonwabela iholide yothando kunye nexhala apho yonke into inyanyekelwa ngenxa yokuba ibandakanya konke. Kodwa kuthekani ukuba niyintsapho? KwiiLwandle zeSandals, lonke usapho lwamkelekile!
Iholide yoLwandle ebandakanyiweyo ® ibandakanya ngaphezulu kwayo yonke into yakhe wonke umntu.
Apha kukho wonke umhlaba kunye nemidlalo yamanzi phantsi kwelanga, ukusuka ngalo naliphi na ixesha ukutya okumnandi ukuya kuthi ga kwiivenkile zokutyela ezingama-21, ukuya kwimisebenzi nakwizinto eziluncedo kuyo yonke iminyaka, kunye nee-suites ezifanelekileyo zosapho.
Le ikhefu losapho elinokufakwa okungakumbi, ukhetho oluninzi, kunye neendlela ezininzi zokonwabela ixesha kunye.
Ukuzisa wonke umntu ngokusondeleyo-Izibini, iiNtsapho, Abahlobo abaBalaseleyo, amaqela kunye neMitshato
Ukulindela okugqibeleleyo kulindelwe kwiiLwandle zonke iiholide ezibandakanya iiTurks kunye neCaicos kunye neJamaica. Dlala kwiilwandle ezi-pristine, ezinesanti emhlophe ezichukunyiswe lulwandle olucwengileyo. Chitha ikhefu losapho kumagumbi obutofotofo nakwizuti. Yonwabela uluhlu lwezinto ezonwabisayo nezonwabisayo zabantwana bayo yonke iminyaka. Zonke iilwandle iiholide zibandakanya zonke iipaki zamanzi zePirates Island, abalinganiswa baseSesame street®, iinkampu zabantwana, kunye neklabhu yasebusuku enomdla kulutsha. Ewe, iiLwandle zonke ezibandakanya iiholide eJamaica naseTurks naseCaicos zithembisa iiphakeji zentsapho ezingenakulibaleka phantsi kwelanga leCaribbean. Uceba umtshato? Iindawo zokutyela elunxwemeni zinika imitshato yokufika emangalisayo kunye neephakheji zekhefu.
Sukuyithatha into oyithethileyo ngayo
Owona mthombo wolwazi uku uphononongo lweendwendwe. Funda ukuba zithini na ezi ndwendwe malunga nenyanga edlulileyo kwi-TripAdvisor malunga neeholide zabo kwiiholide zolwandle.
Iilwandle iTurks kunye neCaicos kwiProvidenciales
Iholide yaseCaribbean kwisiqithi sokwenene se-luxury-ivotelwe # 2 Ihotele yeCaribbean yeeNtsapho yi-TripAdvisor
IINKCUKACHA: “Siye kwi-16 emnandi! Kwakumnandi! Aba bartenders kunye nabasebenzi bokulinda, ulwamkelo - konke kuyamangalisa! Iindawo zokutyela zazintle kakhulu! I-Tashana ngakumbi kwi-Neptune's ibingaphezulu nangaphaya !!!! Ngokuqinisekileyo bendizakubuyela umva! ”
Iilwandle zaseNigril eJamaica
Ifunyanwa kwindawo ekuthiwa yi-Negril's 7-Mile Beach eyaziwayo-ivotelwe # 1 Irizothi yeCaribbean yeeNtsapho yiTripAdvisor
Uhambo35019172706: “Sihleli ngokumangalisayo kwiiLwandle. Igumbi lethu lihle. Indawo yam iyayithanda kwaye yenze itoni yabahlobo. URicardo usikhathalele ngokwenene ebharini kunye noAdrian echibini eliphambili. Ukutya kube kuhle kakhulu. Ngokuqinisekileyo siza kubuyela kwesi siqithi siyiparadesi. ”
Iilwandle iOcho Rios eJamaica
Intsapho yaseJamaica yokubaleka ngaselunxwemeni-I-Voti ephezulu ye-5 yeCaribbean Resort for Families yi-TripAdvisor
kelizabeth_13: “YONKE into yayingaqhelekanga. Ukutya, iihambo, amagumbi, kunye nabasebenzi !! Ngokunyaniseka, ndicinga ukuba abasebenzi benza ukuba ixesha lakho li-1000x libe ngcono. Banobuhlobo, basamkela, kwaye ngokubanzi bahlala beqinisekisa ukuba ukhathalelwe. Iqela levenkile yokuntywila liyamangalisa. UGlenroy, Oshan, Sheriff, Sheldon, Marlon, Ackeem, Triston, kunye no Shan babehlala bonwabile kwaye besamkela. UGlenroy wenze konke ukuntywila ngokutyibilikayo, kumnandi, kwaye kukhuselekile! Ngokuqinisekileyo yayiqaqambile kuhambo lwam. I-snorkeling kwisikhephe seglasi nayo kufuneka yenze ngokunjalo. Andikwazi kulinda ukubhuka kwakhona !! 10/10 olu hambo. ”
Yonke into ibandakanyiwe
Kwiilwandle, phantse nantoni na onokucinga ngayo ifakiwe. Akukho sidingo seewallet, yiphose inkxalabo yakho kwimimoya yeleropiki. Iimbadada zichaza konke okubandakanya konke oku:
Iindawo zokutyela neeBhari
Iipaki zamanzi zePirates Island
IMidlalo yaManzi aMoto
IGalufa kunye neMidlalo yoMhlaba
Iilwandle ezilungileyo zeCaribbean
Ubusuku bobusuku kunye noLonwabo
Robert Mondavi Twin Oaks® iwayini
Imitshato kunye neHoneymoons
Utshintsho kwisikhululo senqwelomoya
Ukuhamba kwamapolisa kwizigulana ze-COVID-19
Inkundla yaseSpain iyayala iklabhu yasebusuku i-COVID Pass Mandate